ज्यामारा अपार्टमेन्ट कि ‘होराइजन’ ?
Bichitra_Kumar 2274 days ago
kamana000 2274 days ago
monkyyou 2274 days ago
ramas 2274 days ago
shiva_linga 2274 days ago
Biruwa 2274 days ago
metta 2255 days ago
kaliya 2255 days ago
magorkhe1 2255 days ago
Visitor is reading ज्यामारा अपार्टमेन्ट कि ‘होराइजन’ ?
Visitor is reading help me with nepali fonts!
Visitor is reading Ajay Dev's case sparks interest of CBS news
Visitor is reading मेरो नेपाल मा ब्याण्ड बज्यो (अन्तिम भाग)
Visitor is reading Leaders, editors denied mobile phone service
[VIEWED 6286 TIMES]
Posted on 05-09-15 2:59 PM Reply [Subscribe]
ग्राहकको प्रश्न ज्यामारा अपार्टमेन्ट कि ‘होराइजन’ ? सुनील महर्जन काठमाडौं रमेशनन्दन वज्राचार्यले भुइँचालोले धापासीस्थित पार्क भ्यु होराइज अपार्टमेन्ट चर्किएर आफ्नी श्रीमती शारदा वज्राचार्यको मृत्यु होला भनेर सोचेका पनि थिएनन्। ललितपुर ठैब निवासी वज्राचार्यले सोचून् पनि कसरी? आखिर ९ रिक्टरको भूकम्पीय जोखिम थेग्न सक्ने र भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृत लिएर बनाइएको भनेर बहुप्रचारित अपार्टमेन्ट हो त्यो। अत्याधुनिक सुविधा र महँगोमा देशका पाँच उत्कृष्ट अपार्टमेन्टमध्ये एकमा गनिने सो अर्पाटमेन्ट भुइँचालोले क्षति पुर्याउने कुरो उनको कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय थियो। सिभिल इन्जिनियरसमेत रहेका वज्राचार्य गत वैशाख १२ गते भूकम्प आउँदा ठैबस्थित आफ्नो निवास कमफोर्ट अर्पाटमेन्टमा जाँदै थिए। बीच बाटोमा पर्ने हरिसिद्धिको पुरानो बस्तीका सयौं पुरानो घर ध्वस्त भएको दृश्य देख्दासम्म पनि उनलाई अपार्टमेन्टमा रहेका श्रीमतीसहित आफन्तहरू सुरक्षित नै छन् भन्ने लागिरहेको थियो। ‘घर पुगेपछि मोबाइलमा छोरो स्वर्णिमको म्यासेज आयो। त्यो हरेर कान्तिपुर हस्पिटलमा पुगें। त्यहाँ श्रीमतीको निधन भएको थाहा पाएपछि एकछिन त सपना हो कि विपनाझंै लाग्यो।’ –वज्राचार्यले भने। श्रीमतीको निधनले गहिरो चोट पुर्याएको भाव उनको अनुहार र स्वरमा स्पष्टै झल्किन्थ्यो। निकै दुःखी हुँदै वज्राचार्यले भने– ‘भूकम्पमा घर भत्किएर धेरै मानिसको ज्यान गएर सिंगो राष्ट्र नै शोकमा डुबिरहेका बेला श्रीमतीको पनि निधन भयो भनेर मन बुझाउन सकिएला।’ तर अर्को मनले फेरि उनलाई एउटा फ्लाटको झन्डै दुई करोड पर्ने त्यो अपार्टमेन्टमा गाह्रोको ढिक्का टाउकोमा लागेर श्रीमतीको मृत्यु हुनुलाई कसरी स्वाभाविकरूपमा लिने भन्ने प्रश्नले निकै घोचिरहेको छ। पारिवारिक जमघटमा नपठाएको भए सायद श्रीमतीको ज्यान जोगिने थियो भन्ने लागेको बताउँदै उनले त्यहाँ जान दिएकामा धेरै पश्चात्ताप महसुस भएको बताए। ‘मामा भगत गुभाजु डेढ वर्षदेखि अपार्टमेन्टको पहिलो तल्लाको १०१ नम्बरको फ्लाटमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यो दिन मामाले आफ्ना दिदीबहिनीलाई खानपिनका लागि बोलाउनुभएको थियो। म र आमा भुइँचालो आउन ठ्याक्क पौने घण्टा अगाडि करिब सवा एघार बजेको आसपासमा अपार्टमेन्टमा पुगेको थियौं।’ –घटनाको सविस्तार सुनाउँदै स्वर्णिमले भने। हामी त्यहाँ बसेर खाना खाँदै थियौं। भुइँचालो आएपछि कोठाको दायाँबायाँको सबै भित्ताहरू चर्र्किएर सिमेन्ट र इँटाका टुक्राटुक्रा उप्किएर तल झर्न थाले। कोठाभरि धुलो उडेपछि त्यहाँ नै मर्ने हो कि भनेर हतनपत्त बाहिर निकिस्ने क्रममा ठूली आमाले आमा शारदालाई हात तानेर बाहिर ल्याउनुभयो। त्यस क्रममा ढोकामा पुग्नेबित्तिकै माथिबाट खसेको इँटाका ढिक्का टाउकोमा ठोक्किएर आमा ढल्नुभयो। टाउकोबाट रगत बग्न थाल्यो। घटनास्थलमै आमाको निधन भयो।’ –स्वर्णिमले भने। बाहिर निस्किने क्रममा माथिबाट खसेको इँटाको ढिक्का टाउकोमा लागेर वज्राचार्य परिवारकै एक सदस्य टंकमान घाइते भएका थिए। उनको टाउकोमा २५ वटा टाँका लगाउनुपरेको थियो। अपार्टमेन्टको भित्री सजावट, कोठाको डिजाइन हेर्दा भुइँचालो हलचल हुनेबित्तिकै यसरी इँटा र सिमेन्टका ढिक्काहरू उप्किएलान् जस्तो नलागेको बताउँदै स्वर्णिमले भने– ‘१५ तल्लाको भवन चर्किएर जुनस्तरबाट क्षतिग्रस्त भयो। त्यस्तो अनुपात कुनै अपार्टमेन्ट त्यो क्षति भएको देखेको छैन।’ ‘अरू अपार्टमेन्टहरू हेर्दा कुनै भित्ता ढल्किएको, कुनै चर्किएको पाइएको छ। तर यो होराइजन अपार्टमेन्टको झ्याल र भित्ता त चर्किएर इँटा र सिमेन्ट डल्लो निस्किएको थियो। तल्लापिच्छे भित्ता क्षतविक्षत हुनु भनेको निकै कमजोर र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर बनाइएको छ भनेर सजिलै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।’ –भगत गुभाजुले भने। अहिले त्यो अपार्टमेन्टलाई अति जोखिमको सूचीमा प्राविधिकहरूले राखेका छन्। त्यहाँ बस्न नमिलेपछि अर्को फ्लाटमा बसिरहेकी शिलु कर्माचार्य आफन्तकहाँ सरेकी छिन्। अपार्टमेन्टका मालिकहरूले अहिले सामान लिनसमेत प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्। १ करोड ७५ लाख रुपियाँ तिरेर तेस्रो तल्लामा फ्लाट लिएकी प्रसुतीगृह अस्पतालकी डा. उषा श्रेष्ठ (खाँड) त्यहाँ छोडेर टोखास्थित बहिनीको घरमा बसिरहेकी छिन्। भूकम्प जाँदा तेस्रो तल्लामा रहेको अपाटमेन्टमा सासुसँग बसेकी उनी त्यहाँबाट भाग्न सफल भएकी थिइन्। डा. श्रेष्ठले सबै सुविधा भएको अपाटमेन्ट भनेर बस्न आएको तर भूकम्पले यही भवनलाई बढी क्षति पुर्याएको बताइन्। भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण डेप्लपर्सले निर्माण गरेको उक्त अपाटमेन्ट सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त भएको छ। सो कम्पनीले उक्त अपाटमेन्ट निकै सुरक्षित भएको दाबी गर्दै प्रचार गरेको भए पनि सस्तो, स्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका कारण उक्त अपाटमेन्ट ध्वस्त भएको छ। भवन लडेर नजिककैको घरहरू पनि जुनसुकै बेला भत्किने सम्भावना रहेकाले स्थानीय बासिन्दाहरूले सो अपार्टमेन्ट भत्काउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। स्थानीयबासी सन्नी महतले भने– ‘अपार्टमेन्ट क्षत–विक्षत भएकाले यसलाई तत्काल नभत्काएसम्म हामी सुरक्षित हुन सक्दैनौं।’ स्थानीय बासिन्दाका अनुसार शुरूमा ९ तल्लाका लागि भनेर स्वीकृति लिएर पछि १५ तल्लासम्म बनाइएको हो। यस कार्यले नियम कानुन लागू गर्नुपर्ने सरकारको लाचारीपनलाई उजागर गरेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ। केही दिनभित्रै स्थानीय बासिन्दा र अपार्टमेन्टमा बस्नेहरू मिलेर अपार्टमेन्टबाट जनधनको क्षति र आवश्यक कारबाही अघि बढाउन बैठक बस्ने बताइएको छ। Published Date: May 8, 2015 http://www.newsofnepal.com/new/nepal/2015/05/88346
Posted on 05-09-15 3:08 PM [Snapshot: 11] Reply [Subscribe]
Once again, builder is Indian. It seems where there are Indians involved there are troubles.How come?
Please log in to subscribe to kamana000's postings.
Posted on 05-09-15 3:53 PM [Snapshot: 86] Reply [Subscribe]
YES. We all know the Answer.
नेपाली लोग LAZY है | अप्ना देश कि समस्याओ को solve करने के लिए हर समय बिदेशी कि मुह देखते है |
Posted on 05-09-15 4:31 PM [Snapshot: 128] Reply [Subscribe]
The answer is wrong, the apartment was not build by Indians for free. They took money, made profit ( may be lots of profit by using substandard materials). Nepali trusted Indian builder, builder cheated, nepali sufered
Regarding looking others for solving problems India too does that. Do you think India solved all its problem? They used to take foreign aid till 2000.they still take foreign aid in defence and space technology.
Any other creative answers?
Posted on 05-09-15 5:23 PM [Snapshot: 200] Reply [Subscribe]
The problem is who verify that it is that safe. It doesn't matter who built it. Important thing is what was the standard for building. Did they have insurance of that apartments? People fall for false advertising. One problem Nepal have is "no check and balance ". I hope they all got insurance and condolences for suffered families.
Posted on 05-09-15 5:32 PM [Snapshot: 225] Reply [Subscribe]
any pic or vid?
Posted on 05-09-15 6:12 PM [Snapshot: 181] Reply [Subscribe]
actually ,the whole of katnmandu has fallen into indian hands if investment is concerned.we should name it marwarimandu.
Posted on 05-09-15 8:49 PM [Snapshot: 457] Reply [Subscribe]
This is because Nepalis city officers are corrupt as hell. Maobadi and these parties beat the common man and call bandha. But when they are in power eat up money from the indian mul ka businessmen.
We should burn the maobadi party ko office in kathmandu and the incompetent city office.
Posted on 05-28-15 6:19 AM [Snapshot: 978] Reply [Subscribe]
सुदिल पोखरेल काठमाडौ, जेठ १४
२०६४ मा भुइँतल्ला बाहेक १२ तला बनाउन स्वीकृति पाएको पार्क भ्यूलाई ४ वर्षपछि १६ तलासम्म थप्ने स्वीकृति दिइयो
भूकम्पको धक्काका कारण बिभिन्न स्थानमा चर्किएका अपार्टमेन्टहरूको अध्ययन गर्नको लागि शहरी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको एक समितिले धापासीस्थित पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्टलाई रातो स्टिकर दिएको छ। रातो स्टिकरको अर्थ अहिले त्यहाँ मानिस बस्न मिल्दैन भन्ने हो।
विस्तृत अध्यनपछि मात्रै सो अपार्टमेन्ट पूरै भत्काउनु पर्छ वा मर्मत गरेर मानिसहरू बस्न मिल्छ भन्ने टुंगो लाग्नेछ। साथै कसको त्रूटिले गर्दा राजधानीको महँगो मध्ये मानिने सो अपार्टमेन्टमा बस्ने नहुने गरी क्षति पुग्यो भन्ने पनि यकिन हुनेछ।
कोहि पनि ग्राहक आफैंले किन्न लागेको अपार्टमेन्ट सुरक्षित छ छैन भन्ने यकिन गर्न सक्दैनन्। सो ठम्याउन सक्ने आवश्यक श्रोत र दक्षता राज्यसँग हुन्छ र राज्यको दायित्व पनि हो।
राज्यको स्वीकृति लिएर बनाईएका अपार्टमेन्टमा राज्यले आफ्नो अनुगमनको दायीत्व पूरा गरेको छ र ती अपार्टमेन्ट सुरक्षित छन् भन्ने मानेर नै नागरिकहरू आश्वस्त हुने र निजी क्षेत्रले बनाएका अपार्टमेन्ट किन्ने हो।
पार्क भ्यू जसरी क्षतिग्रस्त भयो, प्रष्टै देखियो त्यहाँ निर्माण कम्पनी त चुक्यो चुक्यो, राज्य पनि आफ्नो अनुगमनको दायित्वबाट चुक्यो। कसकसको कहाँ र कति दोष छ भन्ने विस्तृत अध्यनको रिपोर्टले देखाउनेछ।
सेतोपाटीले प्राप्त गरेका कागजातले सो अपार्टमेन्ट निर्माणमा सुरू देखिनै बदमासीको संकेत गर्छन्।
पार्क भ्यू निर्माणका लागि काठमाडौ उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयका तत्कालिन नगर नियोजक डा.भाइकाजी तिवारीले २०६४ साल वैशाख १६ गते दिएको प्लानिङ परमिटमा ११ तलासम्म निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै २०६४ साल पुस महिनाको २२ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालिन सुपरिटेण्डेन्ट इन्जिनियर चिरञ्जीवी सुवेदीले स्वीकृति पत्रमा भने दुई तला बेसमेन्टबाहेक १२ तलाको अपार्टमेन्ट निर्माण गरि सञ्चालन गर्न सहमति दिएका छन्।
त्यसको चार वर्षपछि २०६८ साल वैशाख २६ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका सुपरिटेण्डेण्ट इन्जिनियर शम्भु केसीले २ तला बेसमेन्ट बाहेक बढीमा १६ तलासम्म निर्माण गर्ने गरि स्वीकृति दिएका थिए।
पहिलो निर्माण स्वीकृति लिएको चार वर्षपछि आएर बन्दै गरेको पार्क भ्यूलाई थप चार तल्लाको स्वीकृति केका आधारमा र किन दिइयो?
पार्क भ्यू निर्माणका लागि २०६४ साल पुस १७ गते जिओटेक्निकल इन्जिनियर डा. सुरेन्द्रप्रसाद जोशीले भवन निर्माणका लागि उक्त ठाउँ योग्य भएको माटो परीक्षणको रिपोर्ट दिएका छन्।
त्यस्तै वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वातावरण महाशाखाको वातावरण अधिकृत बटु कृष्ण उप्रेतीले पनि २०६४ पुस १७ गते पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्टको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेका छन्। साथै यसलाई सोही वर्षको पुस २० गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको योजना शाखाका इन्जिनियर विद्यानाथ भट्टराईले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गरेका थिए।
अब प्रश्न उठ्छ-पार्क भ्यूको स्ट्रक्चरमा समस्या छ वा माटो परीक्षणको रिपोर्टमा? या निर्माण क्रममा मापदण्ड मिचेर कमसल समानको प्रयोग गरियो?
२०६९ पुस १९ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर शिबहरि शर्माले भवन निर्माण सम्पन्न पत्रमा स्वीकृत गरेका छन्।
सरकारी अधिकारीले भवन निर्माण सम्पन्न पत्र स्वीकृत गर्नुको अर्थ निर्माणको काम सम्पन्न भयो भन्ने मात्र होइन सबै मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भनेको हो।
सेतोपाटीले सम्पर्क गर्न खोज्दा पहिलो स्वीकृतिको ४ वर्षपछि ४ तल्ला थप्न अनुमति दिने इन्जिनियर शम्भु केसी र निर्माण सम्पन्न पत्र स्वीकृत गर्ने शिवहरि शर्मा दुवै पन्छिए। केसीले कैयन पटक प्रयास गर्दा पनि फोन उठाएनन् र एसएमएसको जवाफ फर्काएनन्। केसी अहिले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रमुख पनि हुन्।
शर्मा भने मन्त्रालयका प्रवक्तासित बुझ्न भन्दै पन्छिए। उनले भने ‘म धेरै व्यस्त छु, सबै कागज मन्त्रालयमा दिएको छौ,’ प्रवक्तासँग बुझ्नुहोस्।
स्थानीयवासीले आफूहरूको अनुमति बिनानै अपार्टमेन्ट निर्माण भएको भन्दै आएका छन्। उनीहरुले आन्दोलन गरेपछि २०६७ साल भदौमा अपार्टमेन्ट निर्माण कार्य रोक्कासमेत भएको थियो।
स्थानीयवासी जियन्द्र थकालिले भने, ‘हामीलाई भेला भनेर बोलाइयो, चिया खुवाइयो, उपस्थितिमा दस्तखत गर्न लगाइयो। तर, पछि त्यसलाई भवन निर्माणको लागि स्थानियबासीको अनुमति भनेर देखाइयो। नाम लेख्न नजानेकाको पनि अहिले त्यसमा दस्तखत देख्न सकिन्छ।’
उनले तत्कालिन समयमा धापासी गाविसका सचिव शिबओम पुडासैनिले गाउँलेको स्वीकृति बिनानै हतारमा अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न दिएको आरोप लगाएका छन्।
एउट सामान्य घर बनाउँदा पनि संधियारको स्वीकृति चाहिन्छ। पार्क भ्यू स्थानीयको बिरोधका बावजुत बन्यो मात्र हैन, बन्न सुरू भएको केहि वर्षपछि फेरि ४ तला थप गर्ने स्वीकृति दिईयो।
अहिले आएर यो अपार्टमेन्ट बस्न अयोग्य घोषित भएको छ। स्थानीयहरू अपार्टमेन्टका भाग्नावसेष झरेर मानवीय क्षति हुने डरले त्रसित छन्।
अहिलेको मूल प्रश्न हो-यो त्रूटिपूर्ण निर्माणमा को को दोषी छन् र विस्तृत अध्ययन पछि उनीहरू कारबाहीको भागी हुन्छन् कि हुन्नन्?
Posted on 05-28-15 6:50 AM [Snapshot: 1007] Reply [Subscribe]
टोखा नगरपालिकामा पर्ने धापासीको ‘पार्क भ्यू होराइजन’ लाई सबभन्दा महँगो अपार्टमेन्ट मानिन्थ्यो। निर्माता कम्पनी बरुण डेभलपर्स प्रालिले यसलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक भनेको थियो। त्यही कारण पनि यहाँका २१३ मध्ये १४३ फ्ल्याट रु.८५ लाखदेखि रु.३ करोडसम्ममा बिक्री भइसकेका थिए। ७५ भन्दा बढी परिवार यहाँ बसिसकेका थिए। बसोबास गर्नेमा विदेशी कूटनीतिज्ञदेखि विभिन्न ‘हाइप्रोफाइल’ सम्म थिए। १२ वैशाखको भूकम्पमा धेरै परिवार अपार्टमेन्टभित्रै थिए। भुईंतलाबाट भाग्ने क्रममा माथिबाट खसेको ईंटाले लागेर एक महिलाको मृत्यु भयो। कम्पनले अपार्टमेन्ट पूरै चर्कियो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यसलाई बस्न नमिल्ने ‘रेड स्टीकर’ दिएको छ। मानवीय क्षति नभएको भनिएको यो अपार्टमेन्ट सामूहिक चिहान बन्नबाट धन्न जोगिएको रहेछ। यसको प्राविधिक पक्ष हेर्दा रोचक विवरणहरू फेला परेका छन्। १६ वैशाख २०६४ मा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयको तर्फबाट तत्कालीन नगर नियोजक भाइकाजी तिवारीले हस्ताक्षर गरेर ११ तले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न ‘प्लानिङ परमिट’ दिइएको रहेछ। त्यसैको आधारमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट निर्माण स्वीकृति लिएको बरुण डेभलपर्सले धापासी गाविसबाट नक्शापास गरी काम थाल्यो। २२ रोपनी ७ आना जग्गामा १८५ फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट बनाउने स्वीकृत लिएर जग र फाउण्डेशन बनाउन थालेको डेभलपर्सले थप पाँच रोपनी जग्गा लिएर २५ फागुन २०६६ मा २८ फ्ल्याट थप्ने गरी नयाँ ‘प्लानिङ पर्मिट’ का लागि समितिमा निवेदन दिएको देखिन्छ। समितिले २४ जेठ २०६८ मा उसलाई ‘संशोधित प्लानिङ पर्मिट’ दियो, जसमा तिवारीले नै हस्ताक्षर गरेका छन्। नयाँ पर्मिट अनुसार डेभलपर्सले शहरी विकास तथा भवन विभागबाट बेसमेन्ट सहित १४ देखि १८ तलासम्म निर्माण गर्ने स्वीकृति प्राप्त गर्‍यो। १९ पुस २०६९ मा विभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले डेभलपर्सलाई निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र नै दियो, जसमा विभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर शिवहरि शर्माको हस्ताक्षर छ।
११ तले भवन १८ तलासम्म लैजान सहजै प्राप्त भएको स्वीकृति अब छानबीनको विषय हुनुपर्ने देखिएको छ। ‘पार्क भ्यू होराइजन’ अपार्टमेन्ट विकास समितिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाथोकी भन्छन्, “घर हैन, धराप बनाइएको रहेछ। हामी त्यो धरापमा पर्नबाट जोगिएछौं।” ११ तलेलाई १८ तलेको अनुमतिः धापासी, काठमाडौंस्थित क्षतिग्रस्त पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्ट। बेसमेन्ट सहित १८ तलाको अपार्टमेन्टलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दिएको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र। काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयले ११ तलाको अपार्टमेन्ट बनाउन दिएको ‘प्लानिङ पर्मिट’ (तल)। दुई वर्षपछि यसलाई बदलेर १८ तलासम्म बनाउने अनुमति दिइयो।http://www.himalkhabar.com/?p=102964
Posted on 05-28-15 7:19 AM [Snapshot: 1036] Reply [Subscribe]
हाम्रो देश मा सब जान्नी, अरू लै आरोप लगाउन भन्दा पहिले यो पढ़नी कि बरु? हाम्रो मा सबै हतार मा काम गरेर फुर्सद मा पाछुतौनी बानि छ के
प्रा.डा. प्रेमनाथ मास्के, भूकम्प इन्जिनियरिङ विज्ञ
बारपाकमा केन्द्रविन्दु भएको ७.९ रेक्टर स्केलको भूकम्प आएको हो । त्यो त्यहाँमात्रै लागू हुन्छ, काठमाडौंमा ७.९ आएको होइन । त्यो त्यही ठाउँमा मात्रै लागू हुन्छ, बरु त्यसको असर चाहिँ फरक हुन्छ ।
त्यसको असर काठमाडौंमा भयो । धेरै ठूलो क्षति भयो । १९९० को भूकम्पको इपिसेन्टर पनि खोटाङ अथवा भोजपुरतिर थियो । तर, दुईसय किलोमिटर भन्दा टाढाको काठमाडौंमा त्यसले बिनासै गरिदियो । यसपालिको भूकम्पले पोखरामा त्यति ड्यामेज भएको छैन, तर काठमाडौंमा निकै भयो । पूर्वतिर बढ्ता भयो ।
अहिलेसम्म ९ रेक्टर स्केलसम्म भूकम्प गएको छ । १२ सम्म गयो भने त मान्छे नै उड्छ । हामी इञ्जिनियरहरुलाई जमिन कति हल्लियो भन्ने मतलब छ । हामी त्यसअनुसार डिजाइन गर्छौं । जनमानसले बुझ्नुपर्ने के हो भने कुनै पनि घर भूकम्प प्रतिरोधी हुँदैन । भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्ने भए सुनको घर पनि बनाइन्थ्यो होला, तर हामी बनाउँदैनौं । किनभने बनाउन जरुरी नै छैन ।
जस्तो हामी घडीलाई वाटर प्रुफ भन्छौं । तर अहिले घडीलाई वाटर प्रुफ भन्न छाडिएको छ । दुईसय मिडर गहिरो पानीमा जाँदा पनि पानी नपस्ने घडी बनेका छन् । त्यसैले भूकम्प प्रुफ घर हुँदैन । हामीले गर्ने डिजाइन भनेको भूकम्प आउँदा हुने अधिकतम जोखिमलाई न्यूनतम बनाउने हो । त्यसमा हामी के भन्छौं भने मान्छे नमरोस् । धनजनको क्षति न्यूनतम होस् । महाभूकम्प आयो भने हाम्रो जम्मै संरचना कोल्याप्स नहोस् ।
काठमाडौंकै उदाहरण लिने हो भनेदेखि जम्मै ठाउँमा ड्यामेज उस्तै भएको छैन । तपाईहरुले याद गर्नुभएको हो, उस्तै किसिमका घरहरु पनि ड्यामेज फरक छ ।
जस्तो हामीले अहिले गोंगबू, सामाखुशी, धापासी, माछापोखरी, बालाजु बाइपास, कौशलटार आदिलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ धेरै ड्यामेजहरु भएका छन् । बानेश्वरका केही भागहरु, असन क्षेत्र इत्यादिमा ड्यामेज भएको छैन । के भएको यस्तो ?
यो बिल्डिङ बनाउने तरिकाले वा नयाँ पुरानो अथवा डिजाइनको किसिमले भएको होइन । पहिलो कुरा त भूकम्पकै इफेक्ट हो । यो माटोको इफेक्ट हो ।
काठमाडौं भ्याली पहिले ताल थियो । ताल सुकेपछि माटो मलिलो भयो र त्यसको गहिराइ बढ्दै गयो । कुनै ठाउँमा मलिलो माटोको गहिराइ ५७२ मिटरसम्म छ । र, यो घट्दै जाँदा २५/३० मिटरमा आउँछ । जस्तो बूढानीलकण्ठतिर यस्तो छ । जतिजति माटो कडा भयो, त्यसमा थर्कने कम हुन्छ । जति गहिरो हुन्छ र मलिलो माटो हुन्छ, त्यसमा थर्कने क्रम बढ्दै जान्छ ।
काठमाडौं भ्यालीको दक्षिणतिर क्षति छैन । जतिखेर यो तालको पानी सुक्यो, त्यसबेलाको अन्तिम ड्रेन जहाँ हुन्छ, त्यहाँ बढ्ता मलिलो माटो जम्मा हुन्छ । त्यसकारण लुभु, भक्तपुर, चापागाउँ यिनीहरुचाँहि सबैभन्दा थर्किने ठाउँहरु हुन् । यो अनुसारले ठाउँ-ठाउँमा फरक छ । त्यसैले गोंगबू, धापासीमा बढ्ता ड्यामेज भयो । यो पाटोलाई हामीले बिर्सन हुँदैन । किनभने पछि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि अथवा सेटेलमेन्ट गर्दा र घरहरु बनाउँदाखेरि यी कुराहरु याद गर्नुपर्छ ।
विकासमा धेरै नराम्रो के छ भने १० वर्षे जनयुद्ध भनौं या सुरक्षाका कारणले भनौं, जम्मै मान्छेलाई काठमाडौं आउनुपर्‍या छ, यो स्वाभाविकै कुरा हो । त्यसकारण जहाँ जग्गा पाइन्छ, बस्ने गरेको हो । यहाँहरुले याद गर्नुभएको होला, जस्तो धापासी, कलंकी, सीतापाइला, इमाडोल, धापाखेलमा चारैतिर स्लोप-स्लोपमा बस्ती बसाइएको छ । हामीले एउटा रिसर्च गरेका थियौं, डाटा अनुसार धापासी एरियामा मात्रै जनघनत्व असनको भन्दा बढ्ता छ । हाम्रो लागि त असन सबैभन्दा बढ्ता मान्छे बसेको ठाउँ हो, त्यसले भूकम्प आउँदाखेरि विनास हुने त्यहाँ हो भन्ने थियो । अहिले त्यो भन्दा बढ्ता धापासीमा छ । सीतापाइला र अरु एरियाको पनि यही केस हो ।
बेसिनमा हुँदाखेरिको जुन माटोको असर हो, त्यो भन्दा बढ्ताचाहिँ एजमा असर हुन्छ । यसलाई हामी ‘बेसिन एज इफेक्ट भन्छौं, यसमा रिसर्च गर्न बाँकी छ । बेसिनमा हुने माटाको असर भन्दा बढ्ता सायद एजमा हुन्छ । यो हुन्छ, यसमा हामीले रिसर्च गर्न बाँकी छ । यो गर्नलाई टाइम लाग्छ होला । हामी गर्छौं पनि त्यो । अब हामीले नयाँ बस्ती बसाल्दाखेरि यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
सबैलाई कटू अनुभव हुन्छ होला । घर बनाउन नगरपालिकामा स्वीकृति लिँदा वा हाम्रै इञ्जिनियर साथीहरुले लामो प्रक्रिया अपनाउँदा धेरै दुख हुन्छ । तर, त्यो सहेर पनि घर बनाउँदा ठीक भइदिए त ठीकै हो, अब यहाँ मान्छेले विश्वास गर्न छाडिसके । यहाँ जम्मै कन्ट्रोल गर्ने, घर बनाएको ठीक छ कि छैन भनेर जम्मै चेक गर्नुपर्ने नगरपालिकाले हो । अझ नगर विकास भनौं । अथवा गाउँ समिति होला । तर, त्यहाँ क्षमतै पुग्दैन ।
५ तले भवन संहिता, २२ तले भवन !
माननीय सभासद ज्यूहरुलाई थाहा होला, हामीकहाँ भवन संहिता चाहिन्छ भनेर सुरु भएको सन् १९९० सालदेखि हो । म सुरुदेखि त्यसमा सहभागी भएको हो । हामीले सबैभन्दा पहिले भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगत एउटा टास्क फोर्स बनाएका थियौं । म त्यसको सदस्य थिएँ । त्यहाँ हामी ६ जना सदस्यले काम सुरु गरेका हौं । हामीले प्रतिवेदननै नदिई त्यसबेलाका भवन विभागका चिफ इञ्जिनियरले भारतको रिपोर्ट कपी गरेर बुझाउनुभयो ।
त्यसको दुई वर्षपछि आएर काम भयो र अहिले हामीसँग भवन संहिता बन्यो । १९९४ बाट अहिले आएर २०१५ भइसक्यो । त्यो बिल्डिङ कोड बनाएको ४ देखि ५ तलाको लागि हो । हामीकहाँ कानून के छ भने कुनै पनि घर बनाउँदा यो भवन संहिताअनुसार बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ २२ तला, २८ तला बनाउन थालिसके । ५ तलाका लागि बनाएको भवन संहिता अनुसार २८ तलाको भवन बनाउन हुन्छ ? हामीले यसको के जवाफ दिने ? अहिले यस्तै भइराखेको छ । त्यसैले अहिले हामीलाई चाहिने महत्वपूर्ण कुरा भनेको भवन संहिता हो । अरु देशहरुमा भवन संहिता सामान्यतः तीन वर्षमा परिवर्तन हुन्छ ।
अहिलेको भूकम्पले हामीलाई धेरै कुरा सिकाइदिएको छ । १९९५ को भूकम्पले संसारभरको बिल्डिङ कोड परिवर्तन गराएको थियो । हाम्रो वरिपरि धेरै भूकम्प गइसक्यो । २००५ काठमाडौं भूकम्प, २००१ भूज (गुजरात) भूकम्प, भर्खरै गएको चाइनिज भूइँचालो, चारैतिर जाने भूकम्प अहिले हामीकहाँ गएको छ । भोलि के हुन्छ, हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले हामीले यी कुराहरुबाट सिक्नुपर्‍यो ।
अपार्टमेन्ट काम लाग्दैन भन्नेलाई चड्कन हान्नुपर्छ
अहिले धेरैले भन्न सक्दैन, तर मनमा लागिरहेको छ । यी अग्ला अपार्टमेन्टहरु अब हाम्रोमा काम लाग्दैनन् भन्ने इञ्जिनियरहरुलाई गालामा चड्कन दिनुपर्छ । यसलाई ठीक तरिकाले डिजाइन गर्नुपर्‍यो, ठीक ठाउँमा राख्नुपर्‍यो । ११ तलाको लाइसेन्स लिने अनि १४ तलाको बनाएपछि त यस्तै हुन्छ नि । अहिले त्यही भइराखेको छ । स्ट्रक्चर ठीक छ । ढल्केको पनि छैन, कोल्याप्स भएको पनि छैन । तर, पार्टेसन वालहरु खसेको छ । पार्टेसनमात्रै खस्ता धेरै क्षति नहोला, तर हरेक ईंटाले मान्छे मार्न सक्छ । जस्तो कि होराइजन अपार्टमेन्टमा मारिदियो । मैले हेरेको छु, त्यो ठाउँमा एउटामात्रै ईंटा खसेको छ, एकजना लेडिज दिवंगत हुनुभो । त्यसकारण निर्माण भन्दा अगाडि डिजाइनकै बेलामा ध्यान दिनुपर्छ ।
जहाँसम्म जोडिएका घरहरुको कुरा छ, प्रत्येक घरमा आ-आफ्नै भाइब्रेसन हुन्छ । एउटै घरमा त यस्तो हुन्छ भने न्युरोडमा ८/९ तले घरको वीचमा रहेको ३/४ तले घरको स्थिति के होला ? धन्न मैले सोचेको जस्तो भएन । राम्रै भयो । मेरो सोचाइ गलत होस् । न्युरोडका घरहरु भत्केनन् । तर, मान्छेहरुमा यस्तै जोडिएको बनाउनुपर्छ भनेर म्यासेज गएको छ, त्यो गलत हो । शायद न्यूरोडको माटोको कारणले त्यो बच्यो, अरु ठाउँमा भए जान्थ्यो ।
त्यस्तै धापासीनेर मोर्गन इन्टरनेशनल कलेज मैले देखें । त्यसको डिफेक्ट शायद डिजाइनमै हो । जनताको ज्यान प्यारो छ, एउटा इञ्जिनियर रिसाउँछ भने पनि रिसाओस् । त्यो डिजाइनै गलत छ । त्यस्तो त गर्नुहुँदैन नि । अब जनताले पनि बुझ्नुपर्‍यो । बहालमा बस्न दिने भनेरमात्रै सोच्नु भएन ।
बिस्कुटजस्तो ईंटा बनाउने भट्टा बन्द गरौं
तपाई माननीय सभासदहरुले गर्न सक्नुहुन्छ । यो निर्माण व्यवसायमा क्वालिटी कन्ट्रोल । अहिले ईंटाको साइज हेर्ने हो भने प्लेटजस्तो भएको छ, त्यसको शक्ति हेर्ने हो भने बिस्कुटजस्तो भएको छ । हामीसँग यस्तो गुणस्तर छ । उसले के भन्छ भने गुणस्तरको छाप लागेको छ भन्छ । नेपालमा गुणस्तरले निकालेको पहिलो स्टाण्डर्ड नै ईंटामै हो । त्यसको एउटा सदस्य म पनि थिएँ । त्यसबेला एउटा ईंटाको स्ट्रेन्थ १.५० किलोग्राम हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सभासद महोदयहरुलाई मेरो कोटी कोटी बिन्ती छ, कृपया यसलाई रोक्नोस् । भएको नियम अनुसािर नगर्ने हो भने ईंटा भट्टा बन्द गराउनोस् । धेरैको ज्यान बच्छ ।
अर्को हो सिमेन्ट । हामीले उदयपुर सिमेन्ट लोप भएको देख्छौं । हेटौंडा सिमेन्ट लोप भएको देख्छौं । उदयपुर सिमेन्ट लोप भएको देख्छौं । त्यहाँबाट धेरै राम्रो सिमेन्ट निस्कन्थ्यो । अहिले नयाँ मारुती भनेर म बदख्वाइँ नगरौं, अहिले नानाथरिका सय भन्दा बढ्ता ब्राण्डको सिमेन्ट पाइन्छ । भैरहवा, वीरगञ्ज, सिमरातिर गयो भने हरेक घरमा सिमेन्ट फ्याक्ट्री छन् । लो क्वालिटीको काम नलाग्ने इण्डियाबाट आउँछ, त्यसलाई बोर्डरबाट भित्र्याएर बेचिन्छ ।
मलाई थाहा छैन, मोर्गन इन्टरनेशनल कलेजमा कुन सिमेन्ट प्रयोग गरिएको थियो । त्यसैले भवन संहिता, निर्माण सामाग्री, डिजाइन चेक गर्ने, लाइसेन्स दिने निकायहरुमा, नगरपालिकाले ध्यान दिन जरुरी छ ।
(भूकम्प इन्जिनियरिङ विज्ञ मास्केद्वारा राजधानीमा आयोजित सोच नेपालको कार्यक्रममा प्रस्तुत विचारको अंश)
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/05/277710/#sthash.Sttuey1y.Djp8ksvN.dpuf
Posted on 05-28-15 11:42 AM [Snapshot: 1227] Reply [Subscribe]
गलत कुरा र काम गर्न नेपालि बाट कहिले चुक्थ्यो र ? हरियो हात्ती को मुठ्ठा पाए पछि आमालाई बाउ अनि बाउलाई आमा बनाइ दिन सक्ने क्षमता ( कागजी ) हाम्रा नेपालि अधिकारिक व्यक्तिमा छ | हुईयाको पछाडी दगुर्न हामीलाई कसले भेटोस, ६ बर्स अघि नेपाल गएको बेला मलाइ पनि भएको जग्गा बेची एपार्टमेन्ट लीउ लीउ लागेको थियो | आफु बस्ने हैन अनि भाडामा लगाएर बस्ने इच्छा र घर परिवार संग एक मत हुन् नसकेकोले किनिएन भन्नु पर्यो | तर मेरा कजन ले चाहि दुई तल्ले घर र १९-२० आनाको जग्गा दिएर ३ ओटा एपार्टमेण्ट लिएछन , अहिले डेरामा बसेका छन् |
यी हाइराइज भवन को भबिस्य के छ र के गर्छन थाहा छैन ? मेरो बिचारमा एक दिन पुष्पकमल दाहाललाई कारवाही गर्न सकिएको दिन : त्यो ११ तल्ला को स्वीकृति दिई भवन सुरु गरे पछि १८ तल्ला बनाउन दिने हरु सबैलाई खुल्ला मंच मा ल्याई मुसलमानी नियम पालना गर्न दिनु पर्छ ( expression only )
पहिलो लाइन संग यो कुरा : ४ तल्लाको स्वीकृति लिए भने घरको जग ४ तल्ला बराबरको मात्र धान्ने हुन्छ यदि तेस्मा थप तल्ला थपे भने घरको जगले ७ तल्ला थेग्ने क्षमता हुदैन त्यो घुस खानेलाई थाहा छ भने बनाउनेलाई पनि अबस्यनै थाहा हुनु पर्छ ?
मेरो भतिजोले भनेको सम्झन्छु : म जन्मनु भन्दा अघि आउनु पर्ने यो भुईचालो ? एसो विचार्दा कुरोठिकै लाग्यो | किनकी तेसो भएको भए धेरै असल पक्ष देखिन्थे |
पहिलो पक्ष : उपत्यका मा ६० लाख जनसंख्याको चाप पर्ने थिएन | अरु सहर पनि तेतिकै बिकास हुन्थे होला ?
अनि मेरो कजनले घर जग्गा दिएर हाइराइज भवन रोज्ने थिएनन होला ? आदि इत्यादि |
लौ मेरा कुरा त बेतुके भए कि क्या हो ?